कलाकार दिपक आचार्यकी आमालाई काठमाण्डौमा ट्याक्सीले दिउसै लुट्न खोजेपछी… – Ap Nepal
कलाकार दिपक आचार्यकी आमालाई काठमाण्डौमा ट्याक्सीले दिउसै लुट्न खोजेपछी…
June 1, 2022 147
काठमाण्डौ नेपालको राजधानी त्यसैपनि ब्यस्त शहर , दैनिक अनेक सानाठुला घटनाक्रम भैइनै रहन्छन् । काठमाण्डौको दैनिक जस्तो हुने घटना हो ट्याक्सीको भाडा सम्बन्धी नै। दैनिक जसोनै हामीले देख्ने गर्छौ यस्तो घटना कतै यात्रुको बार्गेनिङग त कतै ड्राइभरको । त्यैले पनि काठमाडौ जाने नयाँ मान्छे हत-पत्त ट्याक्सी चड्दैन बाध्यता नै परिहाले नचडेरनी के गर्ने । आज यस्तै समस्यामा परेका छन् चर्चित कलाकार एवं डाइरेक्टर दिपक आचार्य । उनले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै भनेका छन्।
नागरिक सचेतना को लागि
आज मेरो आमा इटहरी बाट काठमाडौ आउनु भयो!! कोटेस्वर बाट नयाँ बानेश्वर जान पर्ने, म सुटिङ्ग मा थिय, र आमा लाई ट्याक्सी मार्फत बानेस्वर जानू भनेको थिय!! सुटिङ्ग कै क्रम मा आमा को फोन आयो, र भन्नू भयो ट्याक्सी ले कोटेश्वर बाट नयाँ बानेश्वर गयको ८०० रुपैयाँ लाग्छ भन्यो!! म अचम्म मा परे, के गर्ने के गर्ने भय, ८०० तिर्नु ठूलो कुरा थियन तर यौटा सार्वजनिक यातायात मा दिउँसै लुट्पाट गर्न दिनु पनि उत्तिकै ठूलो अपराध हो भन्ने मेरो मान्यता थियो!!
मैले आमालाई एकैछिन कुर्न भने, र ट्राफिक प्रहरी को हटलाइन नम्बर १०३ मा फोन गरे र सम्पुर्ण समस्या बताय!! बगि खाना का ट्राफिक हवल्दार नवराज अधिकारी ले फोन रिसिभ गर्नु भयको थियो!! हामिले यस्तरी दिन दाहाडै राजधानी मा लुटिनु पर्छ भने राज्य माथी हामिले के भरोषा गर्ने? ट्राफिक हवल्दार ले मेरो आमा को नम्बर माग्नु भयो, र आँफै सम्योजन गरेर मेरो आमा लाई फोन गरेर ट्याक्सी लियर मिटर मा बानेश्वर पुर्याउने सर्त मा आमा लाई सकुसल बानेश्वर गन्तब्य सम्म पुर्याउनु भयो!!र आमा ले ट्याक्सी लाई २०० रुपैयाँ दिनु भयछ! ट्राफिक आयको देख्ना साथ त्यो ८०० रुपैया माग्ने ट्याक्सी भागेछ, आमा ले ट्याक्सी नम्बर पढ्न सक्नु हुन्न थियो!!
हामी हरेक पटक देश को दुर्दशा यस्तो हुनु मा नेता मात्र दोशी भन्दै गाली गर्छौ, तर यस्तरी मेरि आमा जस्ता नागरिक लाई दिन दाहाडै ठग्ने हरु कत्तिको दोशी छन, अनि यस्तरी नियम कानुन विपरित ठगेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि चुपचाप सहेर बस्ने हामी कत्तिको दोशी छौ? गल्ती गर्नु मात्र हैन गल्ती गरेको देखेर पनि चुपचाप सहेर बस्नु पनि अपराध हो!! सचेत नागरिक बनौँ, र आफ्नो ठाउँ बाट सबैले आफ्नो कर्तब्य पूरा गरौ!! नागरिक को गुनासो सुनेर तुरुन्त एक्सन लिनु हुने ट्राफिक पोलिश र ट्राफिक हवल्दार नवराज अधिकारी प्रती नमन!!
आउनुहोश सबै मिलेर बिधिको शासन कायम गर्न सहयोग गरौँ, अर्कालाई दोश दिनु अगाडि आफ्नो कर्तव्य पनि पूरा गरौँ!!
Prev“राज्यको पैसा बचाइदिन म मेरो थोत्रे बाइकमै हिँड्ने गर्छु ! PA र बडी गार्ड राखेको छैन !” – मेयर हर्क साम्पाङ
Nextकाठमाडौंका मेयर बालेनले गरे अर्को बोल्ड निर्णय, काठमाडौंका मतदाता मात्र हैन भाडामा बस्नेहरु समेत खु’:सीले गद’ गद !
मेयर हर्क साम्पाङले ग’ राए उपमेयर र वडाका जनप्रतिनिधिहरुलाई सपथ ग्र’ हण (भिडियो सहित)
रेणु दाहाल दोस्रो’ पटक पुनः भरतपुर म’ हानगरपालिकाको मेयरमा उठने भएपछि क्याप्टेन विजयलामाले किन यसो भने ? विजय लामाको यो क डा दनकले धेरैलाई बनायो च कित
दुर्गेश थापाललाई ष`ड्यन्त्र गरेको आरोप लागेपछि पल शाह`लाई फर्काए यस्तो जवाफ